राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी आज, एमालेबाट भण्डारी, कांग्रेसबाट मानवहादुर कि लक्ष्मी ? – Shirish News
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी आज, एमालेबाट भण्डारी, कांग्रेसबाट मानवहादुर कि लक्ष्मी ?
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बुधबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म स‌ंसद् भवनमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
तेस्रो कार्यकालका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा मानवहादुर विश्वकर्मा वा लक्ष्मी राइलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरे पनि आधिकारिक निर्णय भने गरेको छैन।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकबाट भण्डारीलाई दोहोर्‍याउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले बुधबार बिहान नौ बजे बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नाम टुंग्याउने छ।
यी हुन् मतदाता
स‌ंघीय संसदका संसद्का ३३४ मध्ये ३३१ ले मतदान गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रियसभाका लागि राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन जना सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतले शपथ गर्न रोक लगाएको कारण उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै प्रदेशसभाका ५५० सदस्यमध्ये ५४९ जनाले मनदान गर्न पाउनेछन्। प्रहरीको फरारसूचीमा रहेका राजीव गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यको शपथ नै लिएका छैनन् ।
नयाँ सरकार गठनमा प्रचण्ड–माधव पक्षको रणनीति : संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्नेसँग सहकार्य अनिवार्य
सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको वार्ता टोलीबीच आज पहिलो औपचारीक वार्ता
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष राउतको ‘नेम प्लेट’ मा चोर शब्द
बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष अख्तियारको पञ्जाबाट कसरी उम्के ८ लाख घुस लिएका अध्यक्ष राउत ?
बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष राउतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी
रोल्पाको विकास निर्माणमा सघाउँदै नेपाली सेना